कर्णाली र महोत्तरी। गरीब बनाइएको दुबै।
कर्णाली र मधेस। गरीब बनाइएको दुबै।
मधेस र कर्णाली दुबै सयकरौं वर्ष अघि समृद्ध साम्राज्य हरु थिए। अहिले यति सार्हो गरीबी छ। दुबै ठाउँ मा।
गोरखा राज्य को विस्तार का क्रम मा झुक्न नमानेका यी दुई ठाउँ आफै गरीब भएका होइनन्। यिन लाई गरीब बनाइएको हो। त्यस मानेमा कर्णाली र मधेस जुड़वा हुन --- twins.
काठमाण्डु का शासक वर्ग ले संघीयता नबुझेको होइन कि बुझ पचाएको। ज्ञानेन्द्र ले लोकतंत्र नबुझेको होला? होइन होला।
कर्णाली का जनता ले संघीयता र स्वायत्तता बुझेका छन।
कर्णाली ले, मधेस ले, थरुहट ले आ-आफ्नो इतिहास बाट सबक लिनु पर्छ। ५०० वर्ष अगाडि समृद्ध रहेका मधेस र कर्णाली आज २१ औं शताब्दी मा किन यति गरीब? यो गरीबी कृत्रिम हो। यो गरीबी काठमाण्डु को उपनिवेशीकरण का कारणले हो।
Human Development Index मा र जनसंख्या मा कर्णाली र महोत्तरी उस्तै उस्तै ठाउँ मा छन अहिले।
कर्णाली को भाषा लियो काठमाण्डु को गोर्खाली शासक ले किनभने उसँग आफ्नो लवज थिएन। मधेस को अन्न लियो काठमाण्डु को गोर्खाली शासक ले किनभने उसँग खेतीबारी छैन। खोसेर लियो, चोरी गर्यो।
लोकतंत्र र संघीयता ले संभव बनाउने आर्थिक क्रांति ले सबै लाई समेट्छ। गरीबी बाहेक केही नदेखेका, गरीबी बाहेक केही कल्पना नगरेका तीन दलका बाहुन ले संघीयता को मुद्दा मा खुट्टा घिसारेर आर्थिक क्रांति को संभावना लाई पर पर सार्दैछन्।
संविधान निर्माणको संकट
एमाले जतिसक्दो छिटो संविधान जारी गरेर सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छ । तर, कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व छाडने हतार छैन । देशमा अहिले देखिएको विचलन कांग्रेसका लागि, खासगरेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका लागि, प्रतिकूल देखिएको छैन । ...... देशका नेताहरु तारिख दिन खप्पीस अदालतका कारिन्दाजस्ता छन् । संविधान जारी हुने पछिल्लो तारिख भदौ १५ का लागि तोकिएको छ । देशको परिस्थितिले भने संविधान निर्माण तोकिएको तारिखको अनुकूल देखिदैन । ..... संघीय राज्य सीमांकनका विषयमा उठेको विवाद र विरोध देशभरि नै जारी छ । कहिल्यै स्व:स्फूर्त हिसाबले राज्यको सक्रिय विरोधमा नउत्रिएका सुदूर पहाडी क्षेत्रका जनता अभूतपूर्व हिसावले असन्तोष प्रकट गर्दैछन् ।
नेपालको सबभन्दा चीसो मानिएको कर्णाली क्षेत्रका जनता तातेका छन् ।
सुदूर पश्चिममा देशभित्रै ‘अखण्ड’ राज्यको खोजीगर्नेहरु सक्रिय छन् ।
भूमिपुत्रका रुपमा परिचित थारु समुदायका सीधासादा सदस्यहरुले यत्रो परिवर्तनपछि पनि आफू ठगिएको महसूस गरेका छन् ।
.......... सरकारले जनताको यो खिन्नता र असन्तुष्टीलाई शान्ति र व्यवस्थाको समस्याका रुपमा लिएको देखिन्छ । जनताको प्रदर्शनको जवाफमा सरकारले गोली चलाएकोछ, डाँडा–काँडामा कफर््यू लगाएकोछ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । देश राजनीतिक हिसावले रुपान्तरित भइसके पनि शासन–प्रशासनको पुरानो शैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । संविधान निर्माणका क्रममा अहिले उठेका विवादले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित संविधानसभाका सबै छ सय एक सदस्यहरुलाई मूक र वधीर सावित गरिदिएकोछ । .......... संविधानसभाले अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर मञ्चन गरेको सुझाव संकलनको नाटक पनि तमाशा सावित भएकोछ । संघीय राज्यको सीमांकन त एउटा पक्ष मात्रै हो । ...... लोकतन्त्रको नाममा ठट्टा र ख्यालख्यालको राजनीतिमा लागेका नेताहरुले गम्भीर राष्ट्रिय मामिलामा पहिलोपटक ठूलो चुनौतिको सामना गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा ‘तोकिएको’ तारीखभित्र संविधान निर्माणको काम सकिएला भन्ने विश्वास स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरुमा नै देखिदैन । .......
मीनेन्द्र रिजालको विचारमा दुई करोड असीलाख जनताको चित्त बुझाउन सकिदैन, बुझाउन खोज्दा संविधान बन्दैन । अहिलेको राजनीतिको चूरो कुरो यही हो ।
जनताको चित्त बुझाउने प्रयत्नसम्म पनि भएको छैन । नेताहरुमा गोली चलाएर भए पनि शासन गर्नै पर्दछ भन्ने मानसिकता हावी छ ।
....... नेपालका राजनीतिक नेताहरु जनताप्रति भरोसा राख्दैनन् । शक्तिकेन्द्रको आराधना नगरेसम्म सत्ताको केन्द्रमा पुग्न नसकिने विश्वास निकै बलियो छ । ...... अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री कोइराला सबैभन्दा खारिएका खेलाडी हुन् । उनले स्वाभाविक हिसावले सत्ता छोडने कल्पना कसैले गरेको छ भने उसले कोइरालाको राजनीति बुझेको छैन । कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन स्थगित हुने निश्चित भएको अवस्थामा संविधान निर्माणको गति जति सुस्त हुँदै जान्छ, त्यति नै कोइरालाको सत्ताले निरन्तरता पाउँछ । ......... एकीकृत माओवादीको एउटा पक्ष एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न निकै हतारिएको देखिन्छ ।
झापा बन्दले जनजीवन प्रभावित
प्रहरीले झापाको विर्तामोबाट बन्दकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । जबरजस्ती यातायात बन्द गराउँदै सवारी तोडफोडमा समेत संलग्न भएको आरोपमा शान्ति समिति झापाका संयोजक तथा सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष गणेश, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी झापाका जिल्ला अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, सुन्दरलाल गणेश, सुरेश यादव, गणेश ढुंगाना लगायतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
चारदिन देखि विराटनगर पनि बन्द
आज पनि विराटनगरका बजार पसल खुल्न सकेका छैनन् । यहाँबाट संचालन हुने ठुला तथा साना सवारी साधन संचालनमा आउन सकेको छैनन् । ..... बन्दका कारण कुनैपनि विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । चोक चोकमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् । चारदिन यता मुलुककै मुख्य नाकाको रुपमा रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयमा राजश्व संकलन समेत ठप्प छ ।
भारदहमा कर्फ्यू खुले लगत्तै प्रहरी बिटमा अागजनी
केही समय अघि भएको सर्वदलीय छलफलले मंगलबार प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका राजीव राउतको दिउँसो ४ बजे शान्तीपूर्ण शवयात्रा गरि दाहसंस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरु उग्र भए पनि
प्रहरी आज ईलाका प्रहरी कार्यालयबाट बाहिर निस्केको छैन ।
...... यसैबीच भारदहमा अन्दोलमा थप बला पुर्‍याउन भन्दै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मातृका यादव भारदह आइपुगेका छन् । यस्तै मधेसी मोर्चा सम्बद्ध सबै मधेसवादी दलका जिल्ला नेताहरु भरदहमा आइपुगेका छन् ।
काठमाडौंका लागि कर्णाली दुर्गम हो भने कर्णालीका लागि पनि काठमाडौं दुर्गम छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये १५ प्रतिशत भूभागमा फैलेको सबभन्दा ठूलो अञ्चल हो कर्णाली ..... कर्णाली नेपालको ‘गाडधन’ वा वैभवको गुप्त भण्डार (हिडेन ट्रेजर) हो। यहाँको जनशक्ति, जलशक्ति, जडिबुटी, शिल्पकला, स्याउ तथा अन्य अर्गानिक खाद्यवस्तु नेपालमा अन्यत्र पाइँदैन। यार्चागुम्बा, उच्चकोटीका च्याउ लगायत विभिन्न जडिबुटीहरूले यो अञ्चल समृद्ध छ। विश्वकै सबभन्दा उच्च अक्षांश (हाइ अल्टिच्युड) मा फल्ने, कर्णालीमा खेती गरिने ‘मार्सी’ धान विश्वमा अन्यत्र कतै खेती हुँदैन। अनुमानित २२ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता यहीं छ। ...... ४ महान नदीहरूको शिर यही पवित्र क्षेत्रमा पर्छ। सिन्धु नदी (तिब्बती भाषामा ‘संगे खाबाब’), सतलज नदी अर्थात गंगा (तिब्बतीमा ‘लाङ्छेन खाबाब’), हाम्रो कर्णाली (तिब्बतीमा ‘म्याप्चा खाबाब’ वा भारतमा ‘घाघरा’) र ब्रह््मपुत्र (तिब्बतीमा यार्लुङ साङ्बो अर्थात ताम्छो खाम्बाब) कर्णालीका दिदीबैनी नदी मानिन्छन्। ..... वास्तवमा कर्णालीले समृद्ध भूगोलमाथि बसेका विपन्न नेपालीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। रारा ताल, से–फोक्सुन्डो ताल, पचाल झरना, बडीमालिका जस्ता अनगिन्ती पर्यटकीय स्थलले भरिपूर्ण
कर्णालीले सिंहदरबारको निगाह होइन, न्याय खोजिरहेको छ।
...... वि.सं. १८४६ अघिको विशाल खस राज्य .... ‘काठमाडौंका महिला ६० का पनि ३० का जस्ता, डोल्पाका महिला ३० का पनि ६० का जस्ता’ ..... गरिबी, कुपोषण, कामको अत्यधिक चाप, अशिक्षा र बालविवाह तथा चाँडो बच्चा पाउने प्रथा। ...... कर्णालीवासीलाई नेपाली कांंग्रेसको सन्देश छ, तपाईंहरूका हर साझा मुद्दा र साझा हकहितका विषयमा नेपाली कांंग्रेस बिनासर्त तपाईंंहरूसँगै छ। ...... संघीयता भएका भारतको उत्तरप्रदेशको जनसंख्या २० करोड छ भने मिजोरम राज्यको जनसंख्या मात्र ११ लाख छ। ...... देवपुरी हुम्लालाई हेर्दा शिवजीको जन्मभूमि हो भन्ने मान्न कर लाग्छ। ..... आजको कर्णाली मानवनिर्मित समस्यामा परेको छ। उत्तरतिरको सिमाना बन्द छ, दक्षिणको सिमानासम्म कर्णालीको पहुँच नहुनु थप कष्टकर अवस्थाको द्योतक हो।
सीमाङ्कनमा असन्तुष्टि र सम्बोधन
एनआरएन अध्यक्षमा रतन झाको उम्मेद्वारी
Constituent assembly constitution internal colonization karnali Madhesh madhesi mahottari